Nakhu ukuthi i-ejenti yaseChinese isebenzise kanjani i-LinkedIn ekucwaningeni ngamatshe - ama-teles
Nakhu ukuthi Ummeli WaseShayina Wasebenzise kanjani I-LinkedIn Ukuthola Izindleko
UJun Wei Seo, isifiso sokufunda nokubhala esisanda kubhaliswa eSingaporean PhD, akungabazeki ukuthi wajabula lapho emenyelwa ezokwethula izethulo kwabafundi baseChina eBeijing ngonyaka ka-2015.
Ucwaningo lwakhe lobuchwepheshe lwalunenqubomgomo yezangaphandle yaseChinese, futhi wayezimisele ukubona mathupha ukuthi amandla amakhulu akhuphukayo alithola kanjani ithonya.
Ngemuva kwokwethula kwakhe, uJun Wei, owaziwa nangokuthi uDickson, ngokombhalo wasenkantolo wase-U.S, weza kubantu abaningana abathi basebenzela amathangi okucabanga aseChina. Bathe bafuna ukumkhokhela ukuze ahlinzeke "imibiko yezepolitiki kanye nolwazi". Kamuva, babeyipela ngqo le nto ababeyifuna: “scuttlebutt” - amahlebezi nolwazi lwangaphakathi.
Ngokushesha wabona ukuthi bangama-intelligence ejensi waseChina kepha baxhumana nabo, ngokusho kwesitatimende esifungelwe. Kuqala wacelwa ukuthi agxile emazweni aseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, kepha emuva kwesikhathi inzalo yabo yaphendukela kuhulumeni wase-US.
Le yindlela uDickson Yeo aqala ngayo indlela yokuba ngumenzeli waseChinese - umuntu ozogcina esebenzisa iwebhusayithi yokuxhumana enezixhumanisi i-LinkedIn, inkampani yokubonisana ngobuqili futhi ifaka njengesazi esifuna ukwazi ukuheha imigomo yaseMelika. .
Ngemuva kweminyaka emihlanu, ngoLwesihlanu, phakathi kwezingxabano ezijulile phakathi kwe-United States neChina kanye nokuqhekeka kweWashington ngezinhloli zaseBeijing, U-Inde ulivumile icala enkantolo yase-US ngokuthi "ngumenzeli ongekho emthethweni wamandla aphesheya" . Lona oneminyaka engu-39 ubhekene neminyaka eyi-10 ejele.
U-Alumni wase-Singapore's Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), eqeqesha ezinye zezikhulu eziphezulu zase-Asia kanye nezikhulu zikahulumeni, bashaqeka lapho bezwa ukuthi umuntu wabo wangaphambili uvumile ukuthi ungumenzeli waseChina.
“Ubengumfundi okhuthele ekilasini. Bengihlala ngicabanga ukuthi ungumuntu ohlakaniphe kakhulu, ”kusho umfundi owayekade enza iziqu engafisi ukudalulwa igama lakhe.
Uthe uvame ukukhuluma ngokungalingani kwezenhlalo - nokuthi umndeni wakhe unenkinga ngokwezimali njengengane. Uthe bekunzima ukubuyisana nomuntu amaziyo ngesicelo sakhe esinecala.
Owayekade eyisisebenzi esikhungweni lesi upende isithombe ehlukile, wathi u-Seo ubonakala njengomuntu onamqondo ngokweqile ngokubaluleka kwakhe.
Umphathi we-thesis ongumqondisi waleso sikhathi kwakunguHuang Jing, uprofesa ophakeme waseChina-waseMelika owaxoshwa eSingapore ngo-2017 ngokuba "ngumenzeli wethonya elivela kwelinye izwe" ongakhonjwa.
UHuang Jing ubelokhu eziphika njalo ngalezi zinsolo. Ngemuva kokuhamba eSwitzerland, wasebenza okokuqala eWashington DC wase wase Beijing.
Ngokwemibhalo yasenkantolo ekhishwe ngesicelo sika-Seo esinecala , lo mfundi uhlangane namakhosi akhe aseChina kaningi ezindaweni ezahlukene eChina.
Ngesikhathi somhlangano, wacelwa ukuthi athole imininingwane ethile mayelana noMnyango Wezentengiselwano wase-US, ubuhlakani bezokulwa, nangempi yezohwebo yaseSino-US.
UBilahari Kausikan, owayengunobhala waphakade wezinkonzo zangaphandle eSwitzerland, uthe "akathandabuzi ukuthi uDickson uyazi ukuthi usebenzela ubuhlakani baseChina."
Ubengeyena, "uyisiwula esiwusizo esingazi."
U-Inde wenza oxhumana nabo ababalulekile esebenzisa i-LinkedIn, indawo nomsebenzi wokuxhumana nabantu osetshenziswa ngabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-700. Ipulatifomu ichazwe kuphela ngokuthi "iwebhusayithi yokuxhumana ngobungcweti" kumadokhumenti asenkantolo, kodwa ukusetshenziswa kwayo sekuqinisekisiwe kuWashington Post.
Ababesebenzela uhulumeni nabasebenzi bezempi kanye nosonkontileka abathandabuzi ukuthumela imininingwane yomlando wabo we-webhusayithi ukuze bavikele imisebenzi enenzuzo emkhakheni wangasese.
legendIsithonjana sephrofayili kaDickson Yeo esisusiwe manje se-LinkedIn
Lokhu kuveza imayini yegolide engaba khona yezinhlangano zezobunhloli bangaphandle. Ngo-2018, isikhulu sase-US, uWilliam Evanina, waxwayisa ngesenzo "esinobudlova" esenziwa nguBeijing epulatifini ephethwe yiMicrosoft, okungenye yezindawo ezimbalwa ezingavalwanga zokuxhumana zaseNtshonalanga eChina.
UBamba Amy Sarah “Ukuba ngumculi akusho ukuthi ukhona…
Inyunyana yabashayeli bamatekisi ezithuthuthu ifuna ukuletha ...
Amalungelo abesifazane eMauritania: Ubuso bukaSaadani Mint Khaytour ...
UKevin Mallory, owayeyisikhulu se-CIA wagwetshwa iminyaka engu-20 ngoMeyi ngonyaka owedlule ngokulethela izimfihlo zamasosha kumenzeli waseChinese, waqondiswa okokuqala kwi-LinkedIn.
Ngo-2017, i-ejensi yezobunhloli yaseJalimane yathi ama-ejenti amaChinese asebenzisa i-LinkedIn ukukhomba amaJalimane angama-10000. I-LinkedIn ayiphendulanga esicelweni sokuphawulwa kwale ndaba, kodwa phambilini ithe bekuthatha uchungechunge lwezinyathelo zokumisa lo msebenzi olimazayo.
Amanye amathiphu uYehu awathola ngenkathi edabula phakathi kwe-LinkedIn anikezwe imibiko yokubhala “inkampani yakhe yokubonisana,” eyayinegama elifanayo nenkampani enkulu kakade. Lokhu kwabe sekuthunyelwa koxhumana nabo abangamaShayina.
Omunye wabantu axhumane nabo basebenza ohlelweni lwamashini wezempi i-US Air Force's F-35 futhi wavuma ukuthi unezinkinga zemali. Okunye obeyisikhulu seMpi yaseMelika esabelwe iPentagon, enikezwe okungenani ama- $ 2 000 (ama- $ 1) ukubhala umbiko ngomthelela wokuhoxa kwamasosha ase-US e-Afghanistan eChina.
Ukuthola othintana nabo, uYeya, owayezinze eWashington DC ingxenye yonyaka we-2019, wasizwa ngumlingani ongabonakali - i-LinkedIn algorithm. Njalo lapho uYeah ebheka iphrofayili yomunye umuntu, bekuphakamisa uhlu olusha loxhumana nabo onolwazi olufanayo angaba nentshisekelo ngalo. U-Inde umchaze ngokuthi "ongenamandla".
Ngokwamadokhumenti asenkantolo, abaphathi bakhe bameluleke ngokuthi abuze izisulu uma "bebengeneme ngomsebenzi" noma "benenkinga yezimali."
UWilliam Nguyen, umdidiyeli waseMelika wesikole iLee Kuan Yew owaboshwa ngesikhathi kunombhikisho eVietnam ngonyaka ka-2018 wabe esexoshwa U-Yebo ukusho kuFacebook ngoMgqibelo ukuthi u-Inde uzame ukuxhumana naye "amahlandla amaningi" ngemuva kokukhishwa. ijele kanye necala lakhe bakwenza izihloko emhlabeni jikelele.
Ngo-2018, u-Inde waphinde wathumela okungekho emthethweni okuthunyelwe online kwi-firm yakhe. Utshele abaphenyi ukuthi usethole ngaphezulu kuka-400, ama-90% awo aqhamuka "emalungwini amasosha aseMelika nohulumeni ngokuvunyelwa kwezokuphepha." Abanye badluliselwe kumakhosi akhe aseChina.
Ukusetshenziswa kwe-LinkedIn kuyahlekisa, kepha akumangazi, kusho uMatthew Brazil, umbhali-mbhali we-Espionage yamaKhomanisi waseChina: An Intelligence Primer.
"Ngicabanga ukuthi izinhlangano eziningi zezobunhloli emhlabeni jikelele kungenzeka ziyisebenzisela ukucwaninga imithombo yolwazi," kusho yena. "Ngoba kusenzelwa wonke umuntu kwi-LinkedIn ukubeka wonke umsebenzi wawo kuwona ukuze wonke umuntu ayibone - kuyithuluzi elibaluleke kakhulu kulokhu. "
Uthe ukuthunyelwa kwemibiko yokubonisana kuyindlela yokuthi ama-ejenti 'aboshwe' emthonjeni obalulekile ongagculiseka ukuthi unikeze imininingwane ehleliwe.
"Kungumsebenzi wesimanje kwezobuciko bendabuko. "
Isihloko semidiyaLiu Xiaoming: IChina ayisona isitha saseMelika
Umsizi Omkhulu Wenhlangano Yezokuphepha Yezwe laseMelika uJohn Demers uthe leli cala liyisibonelo sendlela yokuthi izwe laseChina lisebenzisa kabi "ukuvuleleka komphakathi waseMelika" futhi lisebenzise "izizwe ezingewona amaShayina ukukhomba abaseMelika. ungalokothi ushiye e-United States ”.
ISingapore, umphakathi onamasiko abantu abalinganiselwa ezigidini ezingama-5,8 lapho amaShayina anobuzwe enza iningi labantu, kudala waba nobudlelwano ne-United States, esebenzisa izisekelo zayo zasemoyeni nezasolwandle. Kepha wabuye futhi wagcina ubudlelwano obuhle neChina.
UMnu Kausikan uthe akakholelwa ekutheni icala lezinhloli - elaziwa okokuqala ukubandakanyeka kwelaseSoviet - lizolimaza idumela lezwe nohulumeni wase-US, kepha wesaba ukuthi abantu baseSingapore bangabhekana nokunye. izinsolo ezinkulu emphakathini waseMelika.
ngeSonto UMnyango wezangaPhakathi eSwitzerland uthe uphenyo aludalulanga neze ngokuphepha kwezokuphepha ezweni uvuka ecaleni.
Idili le-LKYSPP, UDanny Quah, ubhale ku-imeyili ebunkulisa nakwabafundi ababoniswe iphephandaba iStraits Times ukuthi "abukho ubuhlakani noma abanye abafundi besikole sethu abaziwa ukuthi bayabandakanyeka" ecaleni le-Seo.
Umkhulumeli walesi sikole utshele I-BBC ukuthi u-Seoo uthole ikhefu lakhe lokuba ngudokotela ngonyaka ka-2019 kanti ukuqokwa kwakhe sekukhanseliwe.
UDickson Ee akubonakali sengathi uhambile ngokuxhumana nabaphathi bakhe njengoba abaphathi bakhe bebengathanda. Kepha ngoNovemba 2019, waya e-United States ngemiyalo yokuthi enze umphathi wamasosha abe "ngumgcini wemininingwane ongapheli," kusho isitatimende sakhe esisayiniwe.
Uboshwe ngaphambi kokuthi abuze.
Lo mbhalo uvele okokuqala ku: https://www.bbc.com/news/world-asia-53544505
Izitshudeni zaseChinese eSydney ziqonde ngqo ekugaxekeni kwezingane ithumba
Ukunikezelwa komsebenzi "Izintatheli nokhetho eCôte d'Ivoire"